Faah Faahin Qarax Ismiidaamin Ah Oo Ka Dhacay Xerada Ciidanka Ee Genaraal Kaahiye – Hornafrik Media Network
Faah Faahin Qarax Ismiidaamin Ah Oo Ka Dhacay Xerada Ciidanka Ee Genaraal Kaahiye
By HornAfrik	 On Dec 14, 2017
Waxaa isa soo taraya khasaaraha ka dhashay qarax saaka ka dhacay Barxada Dugsiga Tababarka Booliska Jeneraal Kaahiye ee degmada Xamar Jajab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka is qarxinta oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan Booliska oo isku diyaarinayay inay gaardiyaan.
Afhayeenka howl galada Al-Shabaab C/casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in weerarkaas uu fuliyay qof xirnaa jaakadaha qarxa.
Abuu Muscab oo la hadlayay wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegay in weerarkaas ku dileen illaa 27 ruux oo isugu jiray askar iyo saraakiil.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in illaa 15 askari oo boolis ah ay ku dhimatay, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
Qofka fuliyay weerarka is qarxinta ayaa isku soo ekeysiiyay ciidamada, isagoo xirnaa dareyska ciidamada booliska, ciidamada la qarxiyay ayaa ahaa kuwo loo diyaarinayay inay ka qeyb qaataan munaasabadda maalinta ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in ninkan is qarxiyay uu xirnaa dharka Sportska oo ku dul-xirtay Jaakada Qaraxyada,wuxuuna ka soo baxay meel luuq ah,iyagoo intaasi ku daray in khasaaraha intaasi uu ka badan lahaa hadii uu gaari lahaa halka ay ku feylaan ciidanka,balse uu qalqalay islamarkaana halkaasi isku qarxiyay.
Qaraxan ka dhacay Barxada Dugsiga Tababarka Booliska ee Jeneraal Kaahiye ayaa ku soo beegmaya, iyadoo uu jiro diyaar garowga munaasabadda maalinta aas aaska Ciidamada Booliska Soomaaliyeed oo ku beegan 20-ka bisha December.
Axmed Madoobe iyo Mukhtaar Roobow oo ku kulmay Kismaayo
Ciyaartii Galabta dhex mari laheyd Jubbaland iyo Galmudug oo loo baajiyay Sababo Amni